Gabar sodohdeed garaacday - iftineducation.com
Gabar sodohdeed garaacday
aadan21 / February 20, 2017
iftineducation.com – Booliiska dalka Hindiya ayaa haweenay u xiray in ay garaacday sodohdeed kaddib markii aad loo daawaday oo ay dad badani wadaageen muuqaalka dhacdadaasi.
Sangeeta Jain, waxaa la qabtay talaadadii iyada oo lala xiriirinayo weerar loo gaystay haweenay 70 jir ah oo lagu magacaabo Rani Jain oo ku sugan gobolka Uttar Pradesh.
Muuqaalka ayaa u muuqda in la duubay todobaadkii hore, kaddib markii Jain ninkeedu uu guriga ku rakibay kaameerada CCTV-ga loo yaqaano si uu ula socda xaaskiisa.
Booliisku waxay sheegeen in isfahandarro badan ay ka dhex jirtay, ninka, xaaskiisa iyo duqdaba.
Sandeep Jain wuxuu sheegay in xaaskiisu ay qoyska dagaal ku haysay tan iyo markii ay is guursadeen todobo sano ka hor.
Si kastaba ha ahaatee ma cadda sababta ka dambaysay weerarkan iyo sababta ay u qaatay wakhtiga intaas la eg in booliiska lala socodsiiyo.
Sangeeta Jain, oo lagu eedeeyay in ay isku dayday in ay disho sodohdeed wali kama aysan hadlin muuqaalkaas.
Muuqaalkan aan aragga u roonayn ayaa cadho ka dhaliyay dalka Hindiya, waxaana muuqaalka lagu arkayaa qof dumar ah oo dhirbaaxaysa haweenay da’ah oo saaran sariir isla markaasna maro ku duuduubaysa sidii iyada oo ceejinaysa.
Raj Rani Jain, oo isbitaal la geeyay ayaa saxafiyiinta u sheegtay in gabadha ay sodohda u tahay ay dhirbaaxday ayna damacday in ay ceejiso intaas kaddibna waxay soo qaadatay ayay tiri dhagaxaan oo way ila dhacday.
Wiilkeeda ayaa sheegay in xaaskiisu ay sidaas uun ahayd, laakiin wax faahfaahin ah kama uusan bixinin.
Sarkaal sare oo dawladda ka tirsan ayaa talafeshinka NDTV u sheegay in ay baarayaan dhacdadaasi.
Wuxuu sheegay in uu maqlay in dagaal badan uu ka dhex jiray qoyskaasi ayna tahay xaalad xun.
Yaa u badan in la siigeesto Ragga iyo Dumarka ­Daraasad
Dumarka Gaab-gaaban qaabka loogu galmoodo